CRAS & Dolby တိုက်ရိုက် NBA ဂိမ်းအသံလွှင့်နေစဉ်အတွင်း Atmos-Phere သို့ Sunset ယူဆောင်လာ; 2019 NAB ပြပွဲတွင်အထူးသဖြင့် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » CRAS & Dolby တိုက်ရိုက် NBA ဂိမ်းအသံလွှင့်အတွင်း Atmos-Phere ထဲသို့ Suns ဆောင်ခဲ့ကြနှင့်, 2019 NAB Show မှာ Featured
(ထိပ် LR) ရောဘတ် Brock, ပညာရေး၏ CRAS ဒါရိုက်တာနှင့်အန်ဒီ Roundy တစ် 2011 CRAS ဘွဲ့ရများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ 42-ပေ၏ Conservatory အတွက်လက်ရှိ Dolby Solutions အင်ဂျင်နီယာချုပ်, တိုက်ရိုက်အသံထုတ်လုပ်မှု။ အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်း Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအပြင်ဘက်တွင် Dolby Atmos-တပ်ဆင်ထားဝေးလံခေါင်သီ-ထုတ်လုပ်မှုမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်နောက်တွဲယာဉ်။ အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်း Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာရဲ့တောင်ပိုင်းခန်းမအပြင်ဘက်တွင် (အောက်ခြေ) အဆိုပါ CRAS Mbu ။
CRAS & Dolby တိုက်ရိုက် NBA ဂိမ်းအသံလွှင့်အတွင်း Atmos-Phere ထဲသို့ Suns ဆောင်ခဲ့ကြနှင့်, 2019 NAB Show မှာ Featured
(ထိပ် LR) ရောဘတ် Brock, ပညာရေး၏ CRAS ဒါရိုက်တာနှင့်အန်ဒီ Roundy တစ် 2011 CRAS ဘွဲ့ရများနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ 42-ပေ၏ Conservatory အတွက်လက်ရှိ Dolby Solutions အင်ဂျင်နီယာချုပ်, တိုက်ရိုက်အသံထုတ်လုပ်မှု။ အဆိုပါ 2019 စဉ်အတွင်း Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာအပြင်ဘက်တွင် Dolby Atmos-တပ်ဆင်ထားဝေးလံခေါင်သီ-ထုတ်လုပ်မှုမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်နောက်တွဲယာဉ် NAB ပြရန်။ အဆိုပါ 2019 စဉ်အတွင်း Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာရဲ့တောင်ပိုင်းခန်းမအပြင်ဘက်တွင် (အောက်ခြေ) အဆိုပါ CRAS Mbu NAB ပြရန်.
Gilbert, Ariz, မေလ 9, 2019 - မှတ်တမ်းတင်ဝိဇ္ဇာ & သိပ္ပံ Conservatory (CRAS ။ www.cras.edu) ကျောင်းသားများကိုအစစ်အမှန်အချိန်အတွက် On-site ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အလွန်အကောင်းဆုံးအသံအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်သင်ယူဖို့ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအခွင့်အလမ်းများရှိသည်ဖို့ဆက်လက်။ သူတို့ကအစကပင်အချို့သောပညာရှင်များသေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်သစ်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာများအပေါ်လေ့ကျင့်ရ။ အများစုမှာမကြာသေးမီက, CRAS ကျောင်းသားများကိုတိုက်ရိုက်အသံရောနှောလေ့ကျင့်ဖို့ခှငျ့ရခဲ့တနှင့်ဗီဒီယို 42-ပေ -equipped ကျောင်းရဲ့ Dolby Atmos (R) တွင် Fox Sports Arizona ကနေ feeds ။ Phoenix မြို့, Ariz ဆွေးနွေးပွဲ Stick Resort ကို Arena မှာနောဖပြည်၌ Grizzlies နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကဖီးနစ် Suns NBA အိမ်မှာဂိမ်းကာလအတွင်းဝေးလံခေါင်သီ-ထုတ်လုပ်မှုမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်နောက်တွဲယာဉ်။
CRAS လည်းမကြာသေးမီကယင်း၏ 42-ပေဆောင်ခဲ့လေ၏။ အဆိုပါ 2019 မှဝေးလံသော-ထုတ်လုပ်မှုမိုဘိုင်းထုတ်လွှင့်နောက်တွဲယာဉ် NAB ပြရန် Las Vegas မှ, Nev ၌တည်၏။ နှင့် တွဲဖက်. Dolby Laboratories။ ဒါဟာတက်ရောက်သည့် Mbu သွားရောက်နဲ့ CRAS နှင့် Dolby ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်စကားပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှိရာအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုတလျှောက်လုံး Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာရဲ့တောင်ပိုင်းခန်းမအပြင်ဘက်တပ်စွဲခဲ့သည်။
"Dolby မှာကျနော်တို့ဖန်တီးမှုများရဲ့နောက်မျိုးဆက်အားပေးနှင့်လေ့ကျင့်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်နေကြတယ်" ဟု Glenn Kiser, Sr; ဒါရိုက်တာ Dolby Institute နှငျ့ကော်ပိုရိတ်အတွေ့အကြုံများကလည်း, Dolby Laboratories။ "CRAS နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပူးပေါင်းမှတဆင့်ကျနော်တို့ကျောင်းသားများကလက်ပေါ်အတွေ့အကြုံကိုအသံရောစပ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့ထိုသူတို့ပြင်ဆင်မည်လိမ့်မည်ဟုပေးနေကြတယ်။ "
Dolby နှင့် CRAS လည်း Dolby Atmos သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုအခြေခံဖုံးအုပ်နှင့်တိုက်ရိုက်တီဗီများအတွက်ဖော်စပ်အခမဲ့အွန်လိုင်းပညာရေးသင်တန်းများကိုဖွင့်ထားပြီ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကခရီးစဉ် www.cras-atmos.com/.
ရောဘတ် Brock, ပညာရေး၏ CRAS ဒါရိုက်တာ, အ Suns ဂိမ်းနှစ်ခုစလုံးများအတွက် CRAS အသင်းဦးဆောင်လမ်းပြများနှင့် NAB ပြရန် ပို့လိုက်ကြတယ်နှင့်ပညာရေးသင်တန်းများ။ "ဒီလို NBA ဂိမ်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအင်ဂျင်နီယာများလာမည့်သီးနှံတွေအတွက်တစ်သက်တာ၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်တိုက်ရိုက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်းလက်ပေါ်သင်ယူခြင်း," Brock ကဆိုသည်။ "ဒီလိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်လိုအပ်သောရှုပ်ထွေး, အမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသူတို့အဘို့မျက်စိဖောက်တံဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒန် Siekmann, အသံလွှင့်၏ဖီးနစ် Suns VP, အဆက်အသွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဤကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေခွင့်ပြု၌သူ၏အကူအညီတောင်းအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါ။ "
CRAS '' 42-ခြေလျင်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုနောက်တွဲယာဉ်ပါဝင်သည်:
Dolby DP590 Dolby Atmos Processor ကို
(4)့JBL ထိန်းချုပ်ရေး 1 Pro ကို overhead စပီကာ
စပီကာပါဝါမှဦးရစ်သရဖူ 4150 အသံချဲ့စက်
့ JBL Intonato ထိန်းချုပ်မှုစပီကာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အ; အခန်းထဲမှာဒဏ်ငွေ tuning စပီကာစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ခေတ်မီစွမ်းရည်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသော Dolby Atmos တပ်ဆင်ကိုင်တွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်-built ဖြစ်ပါသည်
Brock ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Suns outing အတွက် Dolby ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုဤမျှလောက်များစွာသောအဆင့်ဆင့်အပေါ်အမှန်တကယ်အထူးခဲ့ "ကဆက်ပြောသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက်လည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုစတင်မှုတ်သွင်းခံ feeling သူတို့ရှိရာမှကြောင်း Dolby ထံမှအဖိုးတန်အသိပညာရရှိမှုအနေဖြင့်တိုက်ရိုက် Dolby Atmos ထုတ်လွှင့်နှင့်အတူလက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ "
Brock A2 Dennis ဟာသိုးသငယ်သည်ပိုက်ကွန်, တရားရုံးနှင့်ကွေညာသူမိုက် setup ကို Pre-ဂိမ်းနှင့်အကြို / post ကိုဂိမ်း set ကိုတစ်လှည့်လည်ဘို့ကြည့်ဖို့တရားရုံးအပေါ်ကျောင်းသားများကထုတ် ယူ. ရှင်းပြခဲ့သည်။ Pre-ဂိမ်း, ဂိမ်းအချိန်နှင့် Post-ဂိမ်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်, ကျောင်းသားများ, ဒါရိုက်တာအကြားအပေါငျးတို့သနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများအသံဆွေးနွေးမှုများနှင့်လမ်းညွန်, ထုတ်လွှင့်သမားတွေ, ထုတ်လုပ်သူများအပါအဝင်ကုန်ကြမ်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုမိုဘိုင်းတီဗီ Group ၏ 33HDX ထရပ်ကားထံမှ feeds ကိုလက်ခံရရှိ အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်။
"MTVG EIC (တာဝန်ခံခုနှစ်တွင်အင်ဂျင်နီယာ) ကားလ် Braunwarth ရဲ့ setup ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဆယ်ကင်မရာ feeds တွေကိုအပ်ပေးတော်မူ၏," Brock ဆက်ပြောသည်။ "ဘော့ Pachman ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံထူထောင်ခဲ့သူ A1 တစ် MADI လိုင်းပေါ်တွင်အသံ၏ 60 လိုင်းများအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းကျွေးမွေးခဲ့သည်။ ဤသည်ကျောင်းသားများကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ခြင်း၏ဖိအားပေးမှုမပါဘဲပြပွဲ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗားရှင်းရောစပ်တူအောင်ဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းကိုပေး။ Bob ကကျောင်းသားအားလုံးသူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြပွဲရောနှောအဖြစ်စောင့်ကြည့်ဖို့ FOX အသံထိန်းချုပ်မှုခနျးသို့လှည့်ခဲ့သည်။ "
Kirt Hamm, CRAS အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအားလုံးနောက်ခံတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာ streaming နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေတစ်ထုတ်လွှင့်နဲ့တူတကယ်ဖြစ်ပြီးအသံရောနှောလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်များ၏ပရမ်းပတာနေရခြင်းလမ်းညွန်အတိုင်းလိုက်နာရန်အဘယ်အရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ဒီအခွင့်အလမ်းကိုအမှန်တကယ်ကမ္ဘာ setting ကိုအတွက်ထုတ်လွှင့်အသံထဲမှာအလားအလာအလုပ်အကိုင်များကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းအတွက်ကြံစည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ "
CRAS စနစ်တကျအစီအစဉ်များနှင့်မြင့်မားသောအရည်အချင်းပြည့်သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းများတစ်ဦးချင်းစီညွှန်ကြားချက်နှင့်အင်ဂျင်နီယာအသံသွင်းထားအတွက်ကျောင်းသားများအတွက်အကူအညီအတွက်ခွင့်ပြု၎င်း၏အသေးစားလူတန်းစားအရွယ်အစားအားဖြင့်ပြည့်စုံသော, တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ထောက်ခံလေထုသည်။ CRAS ထက်ပိုဆယ်စုနှစ်သုံးခုများအတွက်အသံဖမ်းအတွက်အရည်အသွေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းပေးခြင်းပေးလျက်ရှိသည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအဆက်မပြတ်ဂီတနှင့်အသံဖမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်ဖို့ updated လျက်ရှိသည်။ CRAS အသံမှတ်တမ်းတင်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အောင်မြင်မှု '' သင်တန်းယဇ်နှင့်ဘာသာရပ်ကိစ္စအမြဲကျောင်းသားများအတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာတဝိုက်ဗဟိုပြုပါပြီ '' ။
အဆိုပါ 11 လအစီအစဉ်ကိုတိုင်းကျောင်းသား access ကိုသင်ယူနှင့်ပြည်နယ်-Of-The-Art အသံဖမ်းနှင့်အတူဖွဲ့စည်းနှင့်ဂီယာဖော်စပ်သော Conservatory ရဲ့စတူဒီယို၏အပေါင်းတို့ကို, ဒီနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးစတူဒီယိုမှာအသုံးပြုတဲ့တူညီတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လွှင့်အတွက်လေ့ကျင့်ပေးရန်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် Pro ကို Tools များ 12, API ကိုအမွေအနှစ် consoles စ, SSL ကို AWS consoles စ, Studer Vista က consoles စ, ပြီးအများကြီးပိုအပါအဝင်အဆောက်အဦ။ ကျောင်းသားအားလုံးနောက်ဆုံးမှာစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်အဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါသခင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အစီအစဉ် II ကိုကနေဘွဲ့ရတစ်ဦး 280 နာရီစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်သင်ဖြည့်စွက်ရပေမည်။
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory အပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.cras.edu, Kirt Hamm, စီမံခန့်ခွဲသူကိုဆက်သွယ်, 1-800-562-6383 မှာ, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ် [အီးမေးလျ protected].
မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory အကြောင်း
Gilbert နှင့် Temp, Ariz နှစ်ခုကျောင်းခွဲများနှင့်အတူ Sun က၏ချိုင့်ဝှမ်း၏စိတ်နှလုံးတွင်အခြေစိုက်။ , မှတ်တမ်းတင်ခြင်းအနုပညာ & သိပ္ပံ၏ Conservatory (CRAS) အသံဖိုင်ပညာရေးများအတွက်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့အစည်းများတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Conservatory မှတ်တမ်းတင်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားဆက်စပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံအမျိုးအစားအတွက်အနာဂတ်အသံပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ်လွှတ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုကူညီထူးခြားတဲ့နှင့်မြင့်မားထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
SSL သည်အသံနည်းပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကို CRAS ကျောင်းသားများအား Ariz ။ Campus မှဂီတကျောင်းတွင်တင်ပြသည် - မတ်လ 30, 2020
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်။ အလားအလာရှိသောကျောင်းသားများနှင့် ၄ င်းတို့၏မိသားစုများအတွက် Open House ဖွင့်လှစ် - ဇန်နဝါရီလ 22, 2020
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား 2019-05-09
ယခင်: DPA နယူးအရွယ်ရနေပြီ Pregame ထုတ်လွှင့်အဘို့ပန်းခြံထဲကကြောင့် Hits
နောက်တစ်ခု: Nixer ၏ Smart PD Dante ပေး Audio Network မှ troubleshooting နှင့်လုပ်ငန်းရှင်များတစ်ဦးနဲ့ Big လက်ကိုပေးသနား